Snapdragon6| နှင့်အတူ Vivo Z5 765G ကိုအတည်ပြုခဲ့သည် Androidsis
၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအမျိုးမျိုး ငါ Z6 5G အသက်ရှင်သည် သူတို့ကတရုတ်ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်ပါ။ မကြာသေးမီကဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ် အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသသောမကြာသေးမီကတရားဝင်ပိုစတာတစ်ခု, ထိုအတူတူပါပဲ၏ဘက်ထရီနှင့်သူရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနည်းပညာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။
မကြာသေးမီကမျှဝေထားသောပိုစတာမှတဆင့် Vivo က Z6 5G ကိုပရိုဆက်ဆာဖြင့်ပါလာမည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည် Snapdragon 765G, 7nm EUV ဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားပြီး 2.4GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်သည်။ ပရိုဆက်ဆာသည် AI အင်ဂျင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းများအတွက် Adreno 620 GPU နှင့်အတူလာလိမ့်မည်။ ပိုစတာကအတည်ပြုသည်မှာစမတ်ဖုန်းတွင် dual-mode 5G ဆက်သွယ်မှုအထောက်အပံ့ပါဝင်ပြီး SA နှင့် NSA ကွန်ရက်များပါ ၀ င်သည်။
ဖုန်းလည်းပါလိမ့်မယ် dual-standby dual-ထောက်ခံမှု အသုံးပြုသူများသည်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ရန်အတွက် 5G နှင့် 4G ဆက်သွယ်မှုအကြားနက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒါဟာအစကပြောသည် Z6 5G တွင် Wi-Fi အရှိန်မြှင့်နည်းပညာနှစ်ခုပါရှိသည်2.4GHz နှင့် 5GHz Wi-Fi အချက်ပြမှုများကိုတစ်ချိန်တည်းဆက်သွယ်နိုင်ပြီး network status ကိုစစ်ဆေးရန်အဆင့်မြင့် algorithms ကိုအသုံးပြုသည်။. ထို့အပြင် terminal သည် 5G + Wi-Fi dual-channel network speed မြှင့်တင်ရန် SLA စမတ်ကွန်ယက်အရှိန်မြှင့်သည့်နည်းပညာကိုလည်းထောက်ပံ့သည် Gizmochina.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Snapdragon6နှင့် 5G dual mode အထောက်အပံ့ဖြင့် Vivo Z765 5G ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်